Shirka Somaliland iyo deeq bixiyayaasha - BBC News Somali
Shirka Somaliland iyo deeq bixiyayaasha
13 Oktoobar 2010
Image caption Shirka dowladda Somaliland iyo UNDP oo ka socda Hargaysa
Madaxweyne Axmed siilaanyo hadalka uu ka jeediyay shirka deeqbixiyaasha iyo xukuumada somaliland wuxuu ku sheegay in ahmiyad u leedahay joogitaanka deeqbixiyaasha ee Somaliland , taasoo muujineysa ayuu yidhi rabitaanka iyo taageerada bulshada caalamka.
Wuxuu sheegay in caalamku garowsaday in dalkeyga gacan ka siiyo dadaaladda uu ku abuuray deganaasho, bulsho dimuqraadi ah, oo nabdoon oo ku yaalla gobol lagu yaqaanno wareer siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo kooxo argagixiso ah oo wax baabi'iya iyo budhcad badeed caalami ah.
Axmed Siilaanyo wuxuu ka hadlay oo kale dhinaca cadaalada waxa uu ka qabtay, dhaqaalaha, la dagaallanka musuqmaasuqa , isagoo sheegay in aragtida ay hiigsanayaan tahay in la dhiso dal madaxbanaan, ammaan ah.
Ugu danbeyntii wuxuu madaxweynuhu sheegay in Somaliland u baahantahay taageerada bulshada caalamka. Isu duwaha deeqaha aadminnimo ee Somaaliya Mark Bowden ayaa isaguna ka hadlay shirka oo sheegay inay sii wadayaan taageerada dadka Soomaliland.
Ma aha oo keli ah ayuu yidhi inaan ka taageerno dhinaca wax soo saarka iyo shaqo abuurka, ee xagga xukuumadda, maamulka dhaqaalaha guud, nabadgelyada, arrimaha bulshada iyo tacliinta ayuu xusay. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Dr Sacad Cali shir ayaa isagu soo bandhigay baahiyaha Somaliland.
Wuxuu yiri " waxaan u baahannahay mucaawinno aannu dib u dhis iyo dayactir ku samaynno wadooyinkayaga, gegooyinka dayuuradaha, dekedahayaga , cisbitaalada, suuqyada magaalooyinka, isbitaallada, dugsiyada, maktabadaha, biyaha, korantada, iyo teknolojiyada.
Maqal Golaha deegaanka Borama oo sameeyay xafiis u gaar ah cabashooyinka shaqooyinka dadweynaha
Golaha deegaanka Borama oo sameeyay xafiis u gaar ah cabashooyinka shaqooyinka dadweynaha
Maqal Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur: Dowladda Federaalka dhab kama aha in ay wadahadal la gasho Maamul Goboleedyada.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur: Dowladda Federaalka dhab kama aha in ay wadahadal la gasho Maamul Goboleedyada.
Maqal Caruur ugu dhimatay Soomaaliya gudniinka fircooniga oo lagu sameeyay
Caruur ugu dhimatay Soomaaliya gudniinka fircooniga oo lagu sameeyay
Maqal Xarunta dhimirka ee Qabri-dahare oo dhaqaale loo la'yahay
Xarunta dhimirka ee Qabri-dahare oo dhaqaale loo la'yahay
Maqal Magacyada ay bulshadu ula baxdo gaadiidka cusub ee Hargeysa
Magacyada ay bulshadu ula baxdo gaadiidka cusub ee Hargeysa
Maqal Gaabis ku yimid hawlihii dowladda deegaanka kaddin isbadaladii halkaas ka dhacay
Gaabis ku yimid hawlihii dowladda deegaanka kaddin isbadaladii halkaas ka dhacay